ओल्ड म्यान एण्ड द सी, कामले हेमिmingवेलाई नोबेल पुरस्कार विजेता बनायो | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, नोभेला, कथाहरू
बुढो मानिस र समुद्र (१ 1952 110२) अमेरिकी अर्नेस्ट हेमिंग्वेको फिक्शन को सबैभन्दा मान्यता प्राप्त काम हो। यसको प्रकाशन पछि, लेखक साहित्यिक मैदानमा फर्कनुभयो। कथा क्युबामा माछावालाको रूपमा लेखकको आफ्नै अनुभवबाट प्रेरित छ। यसले ११० भन्दा बढी पृष्ठमा समात्यो पुराना नाविकको रोमांच र ठूलो मार्लिन माछा पक्रनको लागि उसको संघर्ष।
यो छोटो कथा पहिलो पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो जीवन, जसले हेमिंग्वेलाई रोमाञ्चक बनायो, किनकि उनको पुस्तक धेरैलाई उपलब्ध छ जसले यसलाई किन्न सकेन। एउटा अन्तर्वार्तामा उनले व्यक्त गरे: "... यसले मलाई नोबेल जितेर धेरै खुसी बनायो।" एक तरिकामा, यी शब्दहरू भविष्यवाणी भयो, जस्तो कि सन् १ 1954 .XNUMX मा लेखकलाई नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो.
1 पुरानो मानिस र समुहको सारांश (१ 1952 XNUMX२)
1.1 एक ठूलो लडाई
1.2 अप्रत्याशित अन्त
2 पुरानो मानिस र समुद्रको विश्लेषण
2.2 शैली प्रदर्शन
2.3 बिभिन्न व्याख्या
3 लेखकको केहि जीवनी डेटा
3.1 पत्रकारिता र पहिलो विश्व युद्धको शुरुआत
सारांश बुढो मानिस र समुद्र (1952)
सान्टियागो es एक प्रसिद्ध माछावाला हवाना मा जस्तै "पुरानो"। को कुनै नराम्रो प्याचमा जाँदै छ: अधिक Days० दिन बिना को फल प्राप्त माछा मार्ने। आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्न कटिबद्ध, उनी चाँडै उठ्छ खाडी स्ट्रिमहरूमा प्रवेश गर्न, जब त्यसले टोक्छ सबैकुरा राम्रो हुन्छ जस्तो देखिन्छ आफ्नो हुक मा एक मार्लिन माछा। उसले यो ठूलो चुनौती अरूलाई आफ्नो कौशलता देखाउने माध्यमको रूपमा देख्छ।
एक ठूलो लडाई
ती वृद्ध मानिस तीन दिनसम्म उसको विरूद्ध लडे ठुलो र कडा पेज; ती लामो घण्टाको बखत धेरै धेरै उसको दिमागमा गुज्र्यो। तिनीहरुको बिचमा, उसको विगत, कहिले उसको श्रीमती बस्ने र रमाइलो तिनीहरूको काममा समृद्धि। सानै छँदादेखि नै उनले मन्डोलिनलाई सम्झना गरे जसलाई उनले ब्यापार सिकाएका थिए र सानैदेखि उनको विश्वासी साथी पनि थिए तर पछि गए।
स्यान्टियागोले सबै दिए, र एक अन्तिम प्रयास संग माछालाई सुरक्षित गर्न व्यवस्थित उसको हरपुनले उसलाई घाइते बनायो। आफ्नो उपलब्धिमा गर्व, उसले फर्कने निर्णय गरे। जग्गा फिर्ता गर्न सजिलो थिएन, पुरानो मछुवाले माछा पक्रने शार्कको सामना गर्नुपरेको थियो। यद्यपि उनले धेरै संग लडे पनि, बिस्तारै तिनीहरूले त्यो विशाल माछा खाए र यसको कंकाल मात्र छोडे जसले बूढा मानिसमा पराजयको भावना जगायो।
अबेर दिउँसो, सान्टियागो किनारमा पुगे; आफ्नो डु left्गा छोडियो र ठूलो माछा को अवशेष र थकित र अत्यन्त दु: खी घर गए। त्यहाँ मर्लिनको केही बाँकी नभए पनि, गाउँका सबै जना त्यस्तो माछाको विशालता देखेर छक्क परे। मन्डोलिन त्यहाँ आइपुगे र त्यहाँको आगमन देखे र उनी बुढेसकाललाई छोडेर पछुताए, त्यसैले उनी फेरि उनीसँगै काममा जाने वचन दिए।
बुढा मानिस र समुद्र ...
विश्लेषण बुढो मानिस र समुद्र
कथा समावेश छaस्पष्ट र सरल भाषा, जसले एक धाराप्रवाह र रमाईलो पढ्न अनुमति दिन्छ। धेरै उपन्यासहरू नभए पनि - अन्य उपन्यासहरूको तुलनामा -, घन र गुणस्तर सामग्री प्रदान गर्दछ। यस कथामा त्यहाँ धेरै शिक्षाहरू छन् जुन थप रूपमा पाठकको व्याख्यामा निर्भर हुन्छन्। यसैले यस कामको बारेमा बिभिन्न मतहरू पाउन सकिन्छ।
यो छोटो कथा लेखकको अनुपम शैली देखाउँदछ। एक नायक परिचय गरिएको छ - सान्टियागो, एक पुरानो मछुवा - जसले, आफ्नो बृद्ध उमेरको बावजुद, हार मान्दैन। सधैजसो, त्यहाँ एक सतही मुद्दा छ: माछा मार्ने कमी; यद्यपि कथा अझै अगाडि बढ्छ। चरित्र धेरै मानवीय परिस्थितिहरूको शृंखलामा जान्छ, जस्तै एकाकीपन, निराशावा घाटा, तर ऊ यो सबै बाँचिरहेको छ उसको इच्छा र साहस बिना।
हामी सामना गरिरहेछौं जुन उनीहरूलाई खुला अन्त हो। कथा यसको खास परिणाम हुँदैन, किनकि यो स्यान्टियागोको साथ के हुन्छ भनेर निर्दिष्ट गरिएको छैन। त्यसकारण सबै कुरा पाठकको व्याख्यामा बाँकी छ। उदाहरण को लागी, माछा मार्ने मानिस घर फर्कने उदासी र हार उसको अस्तित्व को अन्त्य भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ।
कुनै श doubt्का बिना, बुढो मानिस र समुद्र यो एक पुस्तक हो जसले तपाईंलाई थुप्रै जीवन परिस्थितिहरूमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसको मुख्य विषयको रूपमा एक अनुभवी मछुवाको यात्रा कुनै न कुनै प्याचको माध्यमबाट भएर पनि, कथा प्रतीकात्मक रूपमा अन्य बुँदा छुन्छ, जस्तै: मित्रता, वफादारी, लगनशीलता, निडरता, घमण्ड, एकाकीपन y मृत्यु, केहि नाम राख्न।
लेखकको केहि जीवनी डेटा
लेखक र पत्रकार अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे शुक्रवार, अगस्त २१, १21 on मा जन्म भएको थियो उत्तरी इलिनोइसको ओक पार्क गाउँमा। उसका अभिभावक तिनीहरू: क्लेरेन्स एडमंड्स हेमिंग्वे र ग्रेस हल हेमिंग्वे; उहाँलाई, एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ; र उनी, एक महत्त्वपूर्ण संगीतकार र गायक। दुबै थिए रूढिवादी ओक पार्क समाजमा सम्मानजनक व्यक्तिहरू।
अर्नेस्ट ओक पार्क र नदी वन उच्च विद्यालय मा भाग लिए। आफ्नो जूनियर वर्ष मा, उनी भाग लिए Many धेरै विषयहरू - पत्रकारिता कक्षा, जुन फ्यानी बिगले निर्देशित गर्‍यो। यस सन्दर्भमा, सर्वश्रेष्ठ लेखकहरूलाई स्कूल अखबारमा उनीहरूको लेखको प्रकाशनका साथ पुरस्कृत गरियो: ट्रापेज। हेमिंग्वे आफ्नो पहिलो लेखन संग जित्नुभयो, थियो शिकागो सिम्फनी अर्केस्ट्राको बारेमा र १ 1916 १। मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
पत्रकारिता र पहिलो विश्व युद्धको शुरुआत
१ 1917 १ In मा - कलेज जान अस्वीकार गरे पछि - उनी कन्सास सरे। त्यहाँ अखबारमा पत्रकारको रूपमा काम सुरु गरे कान्सास सिटी स्टार. केवल6महिनाको लागि यस ठाउँमा बसिरहेको सोच्दै, उसले आफ्नो भावी कामहरू गर्न पर्याप्त अनुभव पायो। पछि रेड क्रसमा WWI मा भाग लिन सामेल भयोत्यहाँ उनले इटालियन मोर्चामा एम्बुलेन्स चालकको रूपमा काम गरे।
एम्बुलेन्समा एक दुर्घटना पछि, अर्नेस्ट आफ्नो जन्म देश फर्कनुपर्‍यो, जहाँ उनी पत्रकारितामा फर्किए. सन्‌ १ 1937 .XNUMX मा उनी संवाददाताका रूपमा स्पेन गए उत्तर अमेरिकी समाचार पत्र एलायन्स द्वारा स्पेनिश गृहयुद्ध कभर गर्न। एक बर्ष पछि, उनले एब्रोको युद्धका घटनाहरू रिपोर्ट गरे र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा उनले डी-डे देखे, जहाँ अपरेशन ओभरल्डर सुरु भयो।
हेमिंगवे हराएको जेनेरेसनको हिस्सा मानिन्थ्यो, अमेरिकीहरूको समूह जसले पहिलो विश्व युद्ध पछि उनीहरूको साहित्यिक जीवन शुरू गर्‍यो। यो त्यस कारणले हो उनका कार्यहरूले निराशा र गाह्रो समयको निराशा देखाउँछन्। उनका कथाहरू र उपन्यासहरू छोटो घोषणात्मक वाक्यहरू र आन्तरिक संकेतहरूको थोरै प्रयोगको साथ कथा गद्यमा लेखिएको हो।
लेखक एक अद्वितीय शैलीको रूपमा पहिचान गरिएको थियो, जसले साहित्यिक क्षेत्रमा पहिले र पछी चिनो लगायो। उनको पहिलो उपन्यास, shindig (१ 1926 २XNUMX), आफ्नो क्यारियर शुरू भयो। यो काम लेख्ने एक धेरै आफ्नै तरिका प्रदर्शन, जुन गर्न हेमिंगवे भनिन्छ: हिमशृद्धि सिद्धान्त। यसको साथ, लेखक कायम राख्छ कथाको तर्क सिधा पाठकलाई दिनु हुँदैन, तर स्पष्ट रूपमा अलग हुनुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » बुढो मानिस र समुद्र
नमस्कार, मेरो नाम अरेली हो र मलाई यो ब्लग मनपर्‍यो, मैले यसलाई वास्तवमै चाखलाग्दो पाए र म धेरै पटक फिर्ता आउनेछु किनकि सामग्री देखाउने तरिका यत्तिको रचनात्मक र यति चाखलाग्दो छ कि हामीलाई पढ्न मन पराउने हामीलाई बढी पढ्न र जान्न प्रेरित गर्दछन्। साहित्यिक संसारको बारेमा बढी। सत्य यो हो कि मलाई यो ब्लग साँच्चिकै मनपर्‍यो किनभने एक क्षणको लागि मलाई क्यान्डी पसलमा सानी केटी जस्तो लाग्यो जुन सब कुराको छनौट गर्न मीठो छनौट गर्न मन परेको छ किनकि मँ सबै कुरा पढ्न चाहन्छु।
अरेलीलाई जवाफ दिनुहोस्
सारा गुटेरिज युएसएसआर को लास्ट समर को लेखक संग साक्षात्कार